Dhibaatada xiriirka ka dhexeeya ninka iyo xaaskiisa
Xiriirka labada jecel ayaa la barbardhigi karaa geedka jilicsan ee dabaysha: waa inay maraan tijaabooyin badan si ay u ilaaliyaan jacaylkooda. Qofku wuu jajabiyaa, laakiin qofku wuu ka adkaadaa wax walba, jacaylkuna wuu sii xoogaystaa sannadihii la soo dhaafay, sida khamriga dheeriga ah.
Aragtida caanka ah Arthur Schopenhauer ayaa sheegtay in dad badani is jecel yihiin, haddana tijaabooyin dheeri ah ayaa u diyaar garoobaya iyaga. Badanaaba imtixaanadaan waxay ka yimaadaan meesha aadan filaynin. Khabiirada cilminafsiyeedka ayaa ogaaday in dhaqdhaqaaqyada burburinta aunts, gossips iyo saaxiibadu ay yihiin kuwa xoogan, oo xooga u leh dareenka dadka jecel. Qof dumar ah oo ku nool xaalad dagaal oo leh nink diidmo ah ayaa lagu taageerayaa dhammaan agagaarka. Haddii ay ku jirto jacayl iyo farxad, saaxiibada shalay ee shalay ayaa si sahlan u rogi kara shakhsiyaadka xagjirka ah kuwaas oo doonaya in ay raadsadaan cilladaha ku saabsan xaaskeyga iyo xiriirka isaga.
Taasina waxay khuseysaa ragga: haddii uu xiriir la leeyahay xaaskiisa wax walba waa siman, wuu ku faraxsan yahay oo si farxad leh ayuu gurigiisa ugu tagaa, oo uusan aheyn kulan saaxiibtinimo ah, wuxuu si sahal ah u heli karaa sumcadda lafdhabarta. Marka uu saaxiibadiis u yimaado pokozlovit mawduuca: "Dhammaan dumarka waa nacas" ama: "Laakiin qadiyadeyda shalay ...", wuxuu noqonayaa ninkiisa shirkad kasta.
Ma jiraan wax waxyeello ka badan marka loo eego tamarta kuwa khasaaray kuwaas oo isu yimid si la mid ah kuwa ku guuleystay guusha. Maaddaama ay jiraan dhibaatooyin qoysas badan oo waqtigayaga ah, way adagtahay in aan lagu dhicin iskutallaabta lagu dhaleeceynayo asxaabtooda nasiib darrada ah ee guurka saaxiibada ama saaxiibada.
Dhibaatada xiriirka u dhexeeya ninka iyo xaaskiisa ayaa ka soo bixi kara khaladka "dadka doonaya". Oo markaa way adagtahay in ay ka adkaato, adigoo udhow inaad la socotid qofka ka walwalsan xajinta xiriirka aad la leedahay qeybta kale. Maanta waxaannu tixgelin doonnaa kaliya noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka xiriirka u dhexeeya ninka iyo xaaskiisa, kuwaas oo ka careysiisay khilaafka ka dhaxeeya mid ka mid ah qaraabada - iyada oo ninkeeda ninkeeda.
Khilaafka noocaan ah waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay midka ugu adag dhibaatooyinka qoyska. Way adagtahay inaad ka fogaato dhibaatada xiriirka u dhexeeya ninka iyo xaaskiisa, haddii hooyadaa-soddeed aysan aqbalin gabadh-soddogga. Caadi ahaan, dabeecaddani waxay ku salaysan tahay isku dhaf adag oo dhibaatooyin qoto dheer leh. Tan macnaheedu waxaa weeye in lagu xallin karo oo keliya iyadoo la adeegsanayo takhtar cilmi-nafsi oo khibrad leh. Dhammaan noocyada xeeldheer la'aanta ah ee xirfaduhu waxay noqon karaan mid dhexdhexaad ah, taas oo yaraynaysa xoojinta murugada, laakiin ma siin doonto fursad ay ku dhisto xiriir dhab ah oo isku dheelitiran.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah talooyin guud oo kaa caawin doona inaad hagaajisid xaalada xitaa haddii kaliya marka ay suurtagal tahay in lagu xaliyo xirfad ahaan.
Nooca ugu horeeya ee xalka ayaa ah kan ugu kalsoon, laakiin ragga way ku raacsan yihiin. Waxay ka kooban tahay ninkeeda naftiisa oo dhisaya xuduudaha u dhexeeya hooyada iyo qoyskiisa cusub. Hooyo ayaa kicisay wiilkeeda, waa waqtigii lagu nasto oo naftaada u noolaan lahaa. Wiilka qudhiisa ayaa awood u leh inuu naftiisa daryeello oo uu xaliyo su'aalo badan oo ah nolol maalmeedka iyo xiriirka qoyska. Haddii hooyadu aysan fahmin tan, waxaa muhiim ah in la dhiso maskax ahaan maskax ahaaneed oo ku salaysan mabda'a: "Waan fahamsanahay, laakiin ma aqbalayo!" Si fudud, ninku wuxuu hal-aragnimo ku sameyn karaa hal ereyaal oo ah in horay looga hortagi lahaa isku-day kasta oo hooyada ah si uu ula hadlo xaaskiisa ama kor u qaado talo . Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa weedha: "Hooyo, waan fahmay fikraddaada iyo mahadnaqa talada, laakiin waxaan u maleynayaa si kala duwan, aniguna sidaan u malaynayo." Si aad u bilawdo, ma dhihi kartid: "Waxaan aaminsannahay ..." Haddii ay hooyadeed soddoggeedu tahay mid aad u colaadeed gabadheeda, waxay noqon doontaa muraayad cas u ah dibi.
Nasiib darro, had iyo jeer ragga ma joogaan dhinaca naagta, mararka qaarkood waxay istaagaan dhinaca hooyada waxayna bilaabaan inay la hadlaan lamaanaha. Dhibaatada xiriirka noocan ahi waa mid aan macquul ahayn. Waxaa intaa dheer, waxaa la rumeeysan yahay in haween aan cuduradu ku noolaan karin xaaladdaan oo kale muddo dheer. Cadaadiska joogtada ah wuxuu ka dhalan karaa boogaha, gumaacad, dhicin iyo xitaa walxaha hore. Xaaladdan si dhammaystiran looma dhicin karo haddii haweeneydu ay qaali u tahay nolosheeda. Xitaa haddii aysan jirin wadatashi daweyn oo bilaash ah ama jaban oo ka jira aaggaaga, waxaa habboon in lagala tashado cilmu-nafsiga internetka iyo akhriska suugaanta.
Waxaa jira tiro yar oo fursado ah oo lagu xallin karo dhibaatada laba qalab - ninka iyo soddogga - oo ka mid ah dhibbanaha, taas oo ah, xaaska. Mid ka mid ah waa in laga caawiyo hooyada sodon-jirka si loo abuuro nolol shakhsiyeed. Sida caadiga ah, dumarka, u nugul muranka iyo masayrka carruurtooda, way adag yihiin. Hase yeeshee, waxaa habboon in la raadiyo fursado lagu xoojinayo xiriirka uu la leeyahay aabaha sharciga. Oo haddaanay jirinba, walaalkaa mooyaane, waxaa haboon inaad isku tijaabiso ragga. Iyo adigoon wax talooyin ah lahayn. Inta badan, abuurista nolosha shakhsiga ah ee hooyada-in-sharciga, kaas oo dalkayaga oo aad u yar yar wakhtiga koritaanka wiil, waxay ka caawisaa in ay ka takhalusaan dareenka ay dareenka ah.
Siyaabo kale oo lagu xallin karo khilaafka dumarka hooyadu waa inuu raadsado meel cad oo ka tirsan madaxda sare. Inta badan, gabar yar iyo hooyo-yar-yar ayaa isku dhacaya dhulka haddii ay wada nool yihiin. Wiilka iyo ninkuna ma dhexgalaan hal qof, tan iyo markii hooyadu ay u baratay inuu "aamusnaado maryo". Xaaladdan oo kale, meesha ugu saxsan ee madaxda qoyska ee xaaska waa lambarka laba meelood. Taasi waa, waxaad ubaahantahay inaad hooyada ka dhigto xarunta go'aan qaadashada, noqoto kan labaad, ugu dambeynna ninkuna wuxuu u shaqeyn doonaa labadaba. Isku dayga in la xakameeyo ninkeeda, inay ku qasbaan inay muujiyaan dhaqdhaqaaqa ayna go'aan ka gaaraan qoysas noocaas ah - tani waa habka kaliya ee lagu xalliyo khilaafka xitaa in ka badan. Kadib, waxay u muuqataa in xaaskiisu ay u timid guri cusub oo ay la socoto xayndaabkeeda, waxayna isku dayaysaa in ay dib udhigto xidhiidhka u dhexeeya hooyada iyo wiilka oo horumariyay sanado badan. Habkani ma aha mid ku habboon qoysaska hooyo-kan sharciga ah horay u muujiyay calaamad muujinaysa xayndaabka saboolnimada, mabda'a wadahadalka iyo dabeecadaha kale ee nafsiga ah.
Ugu dambeyntii, waxaa haboon in la sheego dhinaca saddexaad ee isku dhaca - ee ku saabsan hooyada. Laga soo bilaabo iyada, arrinta ku saabsan dejinta nabadgelyada khilaafaadka waxay ku xiran tahay xataa wiilka. Waa arrin dabiiciga ah in loo habeeyo si ay hooyadeed uga yartahay inay ka yartahay wiilashooda dib u heshiisiinta ama isku dayaan inay iska fogaadaan. Si kastaba ha ahaatee, tani waa hab sax ah oo lagu xalliyo dhibaatada. Haddii hooyadaada ka timid adduunka, aadna u aragto in ay si daacad ah u daneynayso, aynaan isku dayin inaad ku shaqeysid, marnaba diid inaad hadasho. Inta badan tani waa hab sahlan oo wax ku ool ah oo lagu xallin karo dhammaan dhibaatooyinka xiriirka iyada iyo wiilkeedaba!
Sida loo dhaadhiciyo gabadh inay timaado taariikhda
Sababta aan u jeclaanay nafteena inaan ka qoomameyno iyo sida looga takhaluso caqiidadan
Sidee looga gudbi karaa cabsida isbedelka?
Sidee loo xoojiyaa qaybta haweenka muhiimka ah ee fui?
Saaxiibbadoodu way iskharribaan, sidee bay u noqonayaan?
Sidee loo fahmaa nin jecel?
Maxay ragga ugu qadariyaan dumarka?
Isku qab qaboojiyaha iyo sausages
Harsha - rooti Morocco
Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato maraqa soya
Xaamilo macquul ah ka dib ilmo iska soo ridid
Waxaan ku qiyaasayaa inaadan malaynaynin waxa sheygan loo isticmaalay?
Kostyanika, guryaha waxtar leh
Escapesche oo ka yimid Dorado
Sida loo barto raaxeysiga
Maxay gabdhuhu marwalba isku dayaan inay qurux badiyaan?
Qaanuun qurux badan oo cadaan ah 1-da Sebteembar iyaga oo gacmahooda ku jira (laga soo bilaabo qoraallada satin iyo Kanzash) Fasallada Master-ka oo leh sawiro iyo talaabo talaabo talaabo ah
Isticmaalka soodinta dubista quruxdaada
Abaalmarintii ugu horreysay ee caalamiga ah ee buuqa iyo caafimaadka "Grace" ayaa lagu soo bandhigay bandhigga TOP LINE
Cilmi-nafsiga xagga xidhiidhka qoyska: masayrka
Guacamole on Grill
Sidee loo daaweeyaa toxobta bustaha?